यसकारण वडाध्यक्षले लिए २२ बर्षिया प्रेमिका संजिताको ज्यान! – Namaste Host
यसकारण वडाध्यक्षले लिए २२ बर्षिया प्रेमिका संजिताको ज्यान!
February 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यसकारण वडाध्यक्षले लिए २२ बर्षिया प्रेमिका संजिताको ज्यान!
धनगढी : कैलालीमा कार्यवाहक वडाध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका-३ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष निरज चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । २२ वर्षीया प्रेमिका सञ्‍जिता चौधरी वडाध्यक्षको कोठामा मृत फेला परेपछि सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतिक विष्टले जानकारी दिए । युवती चौधरी आइतबार बिहान कार्यवाहक वडाध्यक्षकै कोठामा मृत फेला परेकी थिइन् ।
कोठाको बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो । वडाध्यक्ष र युवतीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको मृतकका आफन्तले बताएका छन् भने वडाध्यक्ष चौधरीले भने केही समयअगाडि छुट्टै युवतीसंग विवाह गरेका थिए । मृतक चौधरीको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याउन लागिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
चौधरी पा सो लगाएको अवस्थामा वडाध्यक्षको कोठामा फेला परेकी हुन् । तर घटनाको प्रकृति हेर्दा देह त्याग गरेको जस्तो नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ । युवतीको खुट्टाले भुईमा टेकिएको र बाहिरबाट ताल्चा लगाएइएको अवस्थामा देखिएको छ
उक्त वडाका अध्यक्ष नरेन्द्र शाहको केही महिनाअघि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि चौधरीलाई कार्यवाहक वडाअध्यक्ष दिइएको थियो।
भाइरल हुने चक्करमा जे गरिन उनले …
दु’खद ख’बर : न्यूरोडमा डेरामा बस्ने ३५ वर्षीय चन्द्रलक्ष्मीघरको छतबाट खसेर ज्या’न गयो !
अब एसएलसी कक्षा १२ मा !